Weebụsaịtị a nwere iwu olu niile nke Google Ugbu a Androidsis
Ibe weebụ a nwere ihe niile ị nwere ike ịgwa Google Ugbu a enyemaka olu
Enyemaka olu ọ bụla ga-adị mkpa karị n’afọ ndị na-abịanụ ọ bụkwa otu Google ahụ na I / O 2016 gosipụtara ngwaọrụ ụlọ ya nke ga-abata na njedebe nke afọ iji banye n'ụlọ ahụ n'ụzọ zuru ezu. Enyemaka olu a dị na nyiwe ndị ọzọ dịka nke Amazon na Alexa, mana anyị ejirilarị iji oke arụmọrụ nke ige ntị na ngwaọrụ anyị yana nnukwu Google Ugbu a.
Ugbu a ọ bụ Google mgbe ọ chọrọ inye nghọta ka ukwuu iwu olu niile dị ma ọ bụ ihe ị nwere ike ịgwa Ugbu a iji mee ihe ụfọdụ. Onye mepụtara weebụsaịtị ahụ bụ Kristijan Ristovski, onye n'onwe ya kwuru na ọ ghọrọ ọrụ herculean ka ịdebe ndepụta ahụ emelitere na mgbanwe ndị ahụ pụtara na iwu Google Ugbu a.
Ọ na-ekwusi ike na nchọta ya edugala ya karịa iwu 150 na karịa 1.000 iche. Ristovski ga-aga n'ihu na-emelite weebụsaịtị ka onye ọrụ ọ bụla wee mara iwu niile. Ọ baghị uru ikwu, ndepụta iwu ndị ahụ adịghị na Spanish, mana ị nwere ike nweta echiche banyere ndị niile ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ị tụgharịa ha. Naanị ihe na - eme bụ na Google na - ejikọ ọtụtụ iwu na asụsụ gị wee mezie ha na asụsụ ndị ọzọ.
Anyị ekwuola okwu n'oge ahụ nnukwu ndepụta nke iwu na Spanish. Ọ dịla njikere na weebụsaịtị a, ihe e ji mara ya inwe ndepụta nke edemede n’aka ekpe, yabụ ị nwere ike ịchọta iwu olu karịsịa ngwa ngwa. M na-agba gị ume ịbịa gbalịa ụfọdụ dịka ndị metụtara oge, ahịa ahịa, mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ ọbụna mmekọrịta dị n'etiti ndị mmadụ. Ọzọ nke nkọwa ya bụ search nkebi ahịrịokwu, nke nwere ike ịzọpụta gị ole na ole bara uru sekọnd.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ibe weebụ a nwere ihe niile ị nwere ike ịgwa Google Ugbu a enyemaka olu
Asus ZenUI launcher nwere ike ugbu a arụnyere na ihe ọ bụla gam akporo 4.3 ma ọ bụ ngwaọrụ dị elu
Ihu nke Samsung Galaxy Note 7 leaks